नतालिया, Semalt विशेषज्ञ, आधारभूत SEO अभ्यास प्रस्तुत गर्दछ
एसईओ इन्टरनेट मार्केटिंग को एक आवश्यक पक्ष हो, र यो हरेक दिन ठूलो र अधिक जटिल हुन्छ। कसैले पनि एसईओको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउन दाबी गर्न सक्दैन त्यसैले यदि तपाईं भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने यस बारे थोरै जानेर चिन्ता नगर्नुहोस्। एउटा कुरा पक्का छ कि यति राम्रो छ कि तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को अनुकूलित, राम्रो मौका यो खोज इन्जिन द्वारा उच्च क्रमबद्ध गर्न को लागी र तपाइँको व्यापार 'अनलाइन उपस्थिति को अधिक लाभ हो। त्यसो भए, सबैभन्दा धेरै आधारभूत SEO अभ्यासहरू के हुन्?
नतालिया, Semalt SEO विशेषज्ञ, व्याख्या गर्दछ कि मेटा ट्यागहरूले तपाइँको पृष्ठहरू खोजीकर्ताहरूलाई वर्णन गर्दछ। उनीहरूसँग उत्तम सम्भावित कुञ्जी शब्द र वर्णन हुनु आवश्यक छ। वर्णनात्मक र अनुकूलित मेटा ट्यागहरू न केवल तपाईंको साइटलाई खोजी ईन्जिन नतिजा पृष्ठहरू (SERPs) मा सूचीकृत गर्दछ तर यसले तपाईंलाई तपाईंको पुरानो साइटहरू के थियो याद गर्न सजिलो बनाउँदछ। यद्यपि यो याद गर्नु राम्रो छ कि गुगलले खोज ईन्जिनले अनुक्रमणिका लागि मेटा ट्याग प्रयोग गर्दैनन्। मानिसका लागि उत्तम मेटा ट्याग लेख्नुहोस् खोजी ईन्जिनहरूका लागि होईन। ट्यागहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन पाठकहरूले क्लिक गर्नेछन् किनकि यो सम्बन्धित छ जुन उनीहरूले खोजिरहेका छन्।
"सामग्री राजा हो।" तपाईंले सम्भवत यस एसईओ-सम्बन्धित वाक्यांश सुन्नुभएको छ। यो तपाईंको दर्शकहरूको लागि ठूलो सामग्री सिर्जना गर्ने प्रारम्भिक दिशानिर्देशहरू मध्ये एक हो। मानव र खोज ईन्जिनहरूका लागि उत्कृष्ट सामग्री उच्च गुणवत्ता र अद्वितीय हुनुपर्छ। यसले तपाईंलाई लिंक गर्न अन्य साइटहरूलाई आकर्षित गर्दछ, त्यसैले तपाईंलाई धेरै ब्याकलिinking्क अवसरहरू प्रदान गर्दछ।
तपाइँका पाठकहरू उनीहरूलाई के, सटीक, स्पष्ट र सही तरिकाले चाहानुहुन्छ प्रदान गर्नुहोस्। त्यहाँ केहि छैन जुन तिनीहरूलाई तपाइँको साइटमा प्रवाह गर्नबाट रोक्न सक्छ र यसमा उनीहरूका साथीहरूलाई सन्दर्भ गर्दै। यदि तपाइँ उत्पादनहरू वा सेवाहरू बेच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँको साइटमा धेरै व्यक्तिहरू लिनु एक महत्त्वपूर्ण मध्यवर्ती लक्ष्य हो। जब तपाइँको साइट सँधै सामग्रीमा धनी हुन्छ, त्यो उद्देश्य कहिले पनि तपाइँको सबैभन्दा थिच्ने समस्याहरू मध्ये एक हुने छैन। जब तपाईं आफ्नो सामग्री बनाउनु हुन्छ, कुञ्जी शब्दहरूको राम्रो प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंको शीर्षक, हेडर ट्यागहरू, एch्करहरू, र अन्य अंशहरूमा लेखनको बखत कुञ्जीहरू फैलाउनुहोस्।
तपाईं कसरी उच्च-गुणहरू सिर्जना गर्ने सिक्न थप प्रयासहरू लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईं निश्चित रूपमा ती प्रयासहरूबाट ठूलो बाली उठ्नुहुनेछ।
.htaccess राम्रोसँग सेट गर्नुपर्नेछ। तपाईं आफैंमा सेटिंग्स गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको लागि यो गर्न प्रोफेशनल पाउनुहुनेछ। एकचोटि तपाईंले निर्णय गर्नुभयो कि तपाइँ तपाइँको यूआरएल बन्न चाहानुहुन्छ, त्यस ढाँचामा टाँसिनुहोस्। तपाईंसँग केवल www वा नान- www यूआरएलहरू छन् ताकि गुगलले तपाईंको पृष्ठहरू डुप्लिकेटहरू भएको रूपमा देख्दैन। यदि तपाईंसँग दुबै यूआरएल ढाँचाहरू छन् भने, गुगलले तपाईंलाई दण्डित गर्दैन, तर तपाईंले www यूआरएलबाट गैर- www यूआरएलहरू (जुन गर्न सजिलो छ) मा पुनर्निर्देशन प्रदान गर्नुपर्नेछ। तपाईं "गैर- www यूआरएलमा अनुरोधहरू पुनःनिर्देशित गर्न" जस्ता केहि खोज्न सक्नुहुन्छ र तपाईंले गर्नुपर्ने सबै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले आफ्नो रोबोट.टी.टी.एफ. फाइल सही तरीकाले कन्फिगर गर्नु पर्छ। यो सुनेर आश्चर्यचकित हुन सक्छ कि यो सानो पाठ फाइलले तपाईंको साइटको पतन गराउन सक्छ। एक रोबोट.टक्सट फाईलले गुगलको क्रलर र अन्य रोबोटहरूलाई पृष्ठहरूमा मार्गदर्शन गर्दछ जुन तपाईं 'क्रल' हुन चाहनुहुन्न। यदि तपाईं छविहरू खोज ईन्जिनहरू द्वारा सूचीबद्ध गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं आफ्नो रोबोट्स। txt फाईल प्रयोग गरेर ब्लक गर्नुहोस्। स्पष्टतया, तपाई एक त्रुटि गर्न चाहनुहुन्न जब तपाईको रोबोट्स.टी.टी.एस् फाइललाई कन्फिगर गर्दा। एउटा साधारण गल्तीले तपाइँको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण वेब पृष्ठ रोक्न सक्छ र यसलाई नेटबाट टाढा राख्न सक्छ।
यी सब भन्दा आवश्यक एसईओ अभ्यासहरू हुन् र ती सबैलाई साइट एसईओ अभ्यासहरूको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ, र त्यहाँ अन्य अफ-साइट अभ्यासहरू जस्तै प्रमोशन र निर्माण ब्याकलिंक्सहरू छन् । सामान्यतया, तपाइँ साइटमा एसईओ को साथ शुरू र एक पूर्ण अनुकूलन वेबसाइट बनाउन अफ साइट प्रथामा निर्माण।